Maraykanku muxuu u laayaa Marrasta Soomaaliyeed?!(Akhriso+Dhagayso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Feb 28, 2019 1,116 0
Dowladda Maraykanka waxaa lagu tiriyaa hormuudka duullaannada casrigan lagu soo qaaday wadamada muslimiinta oo ay Soomaaliya ku jirto.
1992-dii, ciidamo huwan ah oo ay hor boodeyso dowladdan iyada ah ayaa kusoo duulay Soomaliya, waxaana ay qabsadeen magaalooyin ay ku jirto caasimadda Muqdisho.
Inkastoo ay wateen magaca raja soo celinta, hadana Maraykanku wuxuu lahaa dano gurracan iyo ujeedooyin gumeysi, waxaana markiiba uu wajahay iskacaabin adag oo uga timid shacabka Soomaaliyeed iyo rag culimo ah oo fahansanaa hadafka iyo ujeedkiisa.
Muqdisho ayaa noqotay fagaare lagu baacsado ciidamada Maraykanka, waxaana mujaahidiintii xilligaas joogtay ay si gaar ah u beegsanayeen gawaarida ciidamadiisa marka ay isaga kala gooshayaan wadooyinka caasimadda ee Muqdisho.
Maraykanka, waxaa gaaray khasare culus oo dhinac weliba leh, waxaana meydadka ciidamadiisa lagu jiiday xaafadaha caasimadda, arintaasna waxay soo dedejisay inu qaato go’aan deg deg ah oo qeexaya inuu isaga cararo dalka Soomaaliya.
Askar katirsan Maraykanka oo ku sugan Muqdisho 1993-dii
Marka laga soo tago khasaaraha culus ee ciidamada Maraykanka ku gaaray Muqdisho billowgii sagaashameeyadi, waxay guuldaradaas dhaxalsiisay in lagu dhiirado Maraykanka, loona arko inuu yahay hadaf ay sahlantahay in la iska caabiyo.
Wixii xilligaas ka horeeyay Maraykanka waxa loo arkayay inuu ahaa awood ay adagtahay in la hor istaago, sidas darteed cadaawadii uu u qabay Soomaalida ee ay kala midka ahaayeen shucuubta musliminta, waxaa soomaalida ugu darsamey cadaawad kale oo ah iney sabab u noqdeen in lagu dhiirado.
Tan iyo xilligaas, wuxuu taageerayay duulaan weliba oo lagu soo qaado dalka Soomaaliya, dowladda xabashida Itoobiya ayuuna u arkay iney tahay dowladda uga aar gudi karta shacabka Soomaaliyed, illaa maalintaasna marnaba kama gaabin inuu hiil iyo hooba siiyo Xabashida.
Madaxweynayaashii soo maray Maraykanka ayaa ku socday siyaasadaas ah taageerada Xabashida, iyo in la iska ilaaliyo in ciidamo Maraykan ah oo si toos ah ugu lug yeesha duulaanka Soomaaliya, balse arintaas ayaa isbedeshey wixii ka dambeeyay duulaannadii 11 septembar, kolkaas oo uu Maraykanku waayay magacii uu ku lahaa dunida.
Dowladda Maraykanka ayaa billowday in ciidamo ay ku sheegtay tababarayaal milliteri usoo dirto Soomaaliya, kuwaas oo ciidamada soomaalida iyo kuwa Shisheeyaha siinaya tababaro milliteri iyo talooyin ciidan.
Waxay dhinac kale billowday in diyaaradaheeda drone-ta iyadoo adeegsaneysa ay duqeymo xadidan ka fuliso inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Balse wax weliba waxay isbedeleen markii talada maraykanku la wareegay madaxweynaha lagu muransanyahay inuu caafimaad qabo iyo inkale ee Donald Trump.
Inkastoo madaxda Maraykanka colaada ay u hayaan muslimiinta ay ka simanyihiin, hadana Trump wuxuu gaaray darajada aad u liidata sida ay sheegayaan dadka siyaasadda u dhuundaloola, wuxuuna qarsan waayay wax badan oo ay diblumaasiyadda Maraykanku ku dadaali jirtay iney qariso.
Billowgii sanadkii 2017-ka ayuu wareeegto uu soo saaray Trump wuxuu qeybo kamid ah Soomaaliya ugu aqoonsaday iney tahay aag dagaal, oo ay ciidamadiisu ku beegsan karaan cid weliba oo ay doonaan.
Wareegtadan waxay horudhac u ahayd silsilado howlgallo ah oo ay jeneraalada Pentagonku go’aamiyeen in lagu gumaado shacabka Soomaaliyeed, oo eedsaday marka laga soo tago islaamnimadiisa, askartii maraykanka ee ay ku jiid jiideen wadooyinka Muqdisho billowgii sagaashameeyadii..
Weerarkii ugu xanuunka badnaa ee xigay go’aanka Trump, wuxuu ka dhacay nawaaxiga deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha hoose, 25-agosto ee 2017-ka, ciidamo Maraykan ah oo ay wehlinayaan kuwa soomaali ah ayaa weeraray beerlay ku sugnaa duleedka Bariire, waxayna si bareer ah halkaas ay ugu dileen 11 ruux oo 3 kamid ah ay caruur ahaayeen.
Waxaa xusid mudan in beeralayda la laayay ay dhowr maalmood kahor u tageen ciidamada Maraykanka iyo kuwa soomaalida ee xilligaas la wareegay Bariire, kuna wargeliyeen iney yihiin dad shacab beeraley ah, arintaasna waxay meesha ka saareysaa in gumaadkan lagu tilmaamo inuu kama’ ahaa.
Saacado un kadib gumaadkan lagula kacay shacabka, waxaa war saxaafadeed soo saaray Ing Yiriisow oo xilligaas ahaa wasiirka warfaafinta, hadana ah duqa Muqdisho, Yiriisow wuxuu sheegay in ciidankooda oo kaashanaya kuwa Maraykan ah ay dileen tobaneeyo dagaalyahan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Riwaayada dowladda federaalka ee ah iney beegsatay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo joogay nawaaxiga Bariire, waxay shacabku yaqiiinsadeen iney been tahay markii meydadka 10 ruux oo kamid ah dadka la dilay la geeyay magaalada Muqdisho.
Bulshada ayaa ka carootay arrintan, waxaana odayaasha dhaqanka ee ugaasyada u ahaa dadka la laayay ay ku hanjabeen iney iska difaaci doonaan Maraykanka.
Meydadkii dadkii lagu xasuuqey nawaaxiga Bariire Augosto 2017-ka.
Jeneraal Cirfiid oo xilligaas ahaa taliyaha ciidamada milliteriga ee dowladda ayaa waraysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay in dadka la laayay ay ahaayeen shacab aan waxba galabsan, wax yar kadibna wuxuu iska casiley xilkii uu hayay, kadib cadaadis ay saareen odoyaal ay isku heyb yihiin.
Wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha hoose ayaa durba markii uu dhacay gumaadkaas waxay tacsi la wadaagtay dadka la gumaaday, waxaana sheikh Muxamed Abuu Usaama oo ah waaliga wilaayada uu waraysi uu kaga hadlay arinkaas siiyay idaacadda islaamiga ee Al-furqaan.
Taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa, magaciisana loo soo gaabiyo AFricom ayaa ku adkeystay in dadkii ay ku dileen bariire ay ahaayeen dagaalyahanno katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana warka Africom uu banaanka soo dhigay inaaney jirin wax farqi ah oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo shacabka, marka laga hadlo aragtida dowladda Maraykanka.. cod Africom+ Aayadda qad badatil baqdaa.
Thomas Waldhauser; taliyaha Maraykanka ee Africa.
Sheikh Axmed Cumar Abuu Cubeyda, amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo kalimad jeediyay maalmo kadib gumaadkii bariire ayaa tacsi iyo sabarsiin kadib, wuxuu sheegay waxa uu salka ku hayo duqeymaha iyo xasuuqa arxan darada ah ee uu Maraykanku ku hayo shacabka Soomaaliyeed.
Gumaadkii bahalnimo ee bariire oo keliya ma ahayn, weerarada Maraykanku soomaaliya kula begsaday dadka shacabka ah, waxaa ka horeeyey bariire, weerar ka dhacay deegaan magaalada Jilib ee juabdda hoose u jira 15 km.
16-kii Ogosto 2017-ka, ciidamo Maraykan ah oo ay wehlinayaan kuwa Soomaali ah ayaa weeraray deegaan lagu magacabo Axmad Yare oo u dhexeeya Jilib iyo Kamsuuma, waxaana halkaas ay ku dileen 7 ruux oo isku qoys ahaa.
Dadka la gumaaday waxay kala ahaayeen :-
Xasuuqii deegaanka Axmed Yare, duleedka degmada Jilib
Subaxnimadii lagu guda jiray in la aaso meydadka ay Maraykanku xasuuqeen, ayaa dowladda federaalka waxay soo saartay war kooban oo ay ku sheegeyso in gumaadkan uu amray madaxweynaha dowladda Maxamad Farmaajo, dadka la laaleyna ay ahaayeen xubno katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.. codadka dadweynaha.
Waaliga wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka Sheekh Muxamed Abuu Cabdalla oo ka hadlay xasuuqii ka dhacay deegaanka Axmad Yare ayaa ka tacsiyeeyay dhacdadaas, waxaana wilaayadu ay gurmad maaddi iyo mid macnawi ahba la garab istaagtay dhibanayaasha ay Maraykanku gumaadeen.
Inkastoo bulsha weynta soomaaliyeed ay ka xumaadeen falalkan arxan darada ah ee ay ku kacayaan Maraykanka iyo dowladda federaalka, hadana cida keliya ee jawaab cad ka bixisay waxay noqdeen Mujaahidiinta.
29-kii septembar, 2017-ka, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ballaaran ku qaaday difacyada ciidamada DANAB ee daacadda u ah Maraykanka ku lahaayen deegaanka Bariire.
Weerarka oo lagu daahfuray camaliyad nafhurnimo, kadibna ay xerooyinka u daateen dagaalyahanno katirsan Mujaahidiinta Al-shabaab, waxaa khasaarha dhimashada ee la gaarsiiyay ciidamada uu tababaray Maraykanka ay gaartay inkabadan 70 askari oo ay ku jiraan saraakiil muhiim ah.
Sheikh Cali dheere, Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo shir jaraa’id qabtay saacado kadib weerarkii bariire ayaa sheegay in weerarkan ay ugu aargudayeen dadkii Maraykanka iyo xulafadiisu ku xasuuqeen deegaannada bariire iyo Axmad Yare.
Gaadiid dagaal oo Al-Shabaab kula wareegeen dagaalkii Bariire.
Goblka Galgaduud ayaa kamid ah gobollada marti geliyay gumaadka diyaaradaha Maraykanku ku hayaan shacabka soomaaliyeed, bishi April ee 2018-ka waxay diyaaradaha drones-ta meel u dhow magaalada Ceelbuur ku beegsadeen gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayen nabadoono, abwaanno iyo weliba caruur iyo dumar.
Dadka duqeyntaas ku dhintay waxaa kamid ahaa Nabadoon Cali hareer, Abwaan Yuusuf Dhagey, iyo haweeney lagu magacaabo Luul Daahir Maxamed iyo gabadheeda Maryan oo hal sano jir ahayd.
Ugaas Cabdullaahi Daahir Axmad oo ah ugaaska guud ee beesha Murasade, lana hadlay Alfurqaan ayaa tacsi u diray ehellada ay ka dhasheen dadkan Maraykanku xasuuqey.
Inkastoo weerarada Maraykanku ku beegsaday dad shacab ah tan iyo markii uu talada la wareegay Donald Trump aaney intan oo keliya ahayn, hadana weerarkii ugu dambeeyey ee saameyntiisa lahaa wuxuu ka dhacay deegaanka Kuunya-barrow ee gobolka Shabeellaha hoose.
23-kii bishan February, ee 2019-ka, diyaaradaha Maraykanka ayaa xilli habeen ah duqeymo aan loo meel dayin ku garacay qeybo kamid ah xaafadaha Kuunya-barrow, waxaana duqeymahaas ku dhintay saddex ruux oo midi ahayd gabar yar oo dhalneyd 20 cisho.
Wariyaal katirsan idaacadda islaamiga ee Alfurqaan oo aroor hore gaaray goobihii ay duqeymuhu ka dheceen ayaa la kulmay qaar kamid ah dadkii ehelladooda ku waayay duqeynta Maraykanka.
Diyaaradaha Maraykanka waxay duqeymahan sidoo ku burburiyeen madaraso islaami ah oo lagu barto Qur’aanka kariimka, waxayna taas keentay in labo maalmood oo xiriir ah ay madarasadu xirnaato, walow dib loo furay shalay oo talaado ahayd iyadoo weli burbursan.. codka ardeyda oo klib ah.
Duqeymaha dayuuradaha Mareykanku waxay bulsahda uga tageen raadad xanuun leh, dadka qaar oo waayello ah waxaa ku kacay dhiig kar, halka caruur badan oo sasay habeenkaas ay noqdeen kuwa hurdada ku sasa habeenkii. Intaa waxaa dheer in qaar kamid ah hooyooyinka oo xaamilo ahaa ay soo tuureen ubadkii calooshooda ku jiray.
Ardey wax ku baraneysa madaraso Maraykanku ku burburiyay Kuunya-barrow.
Arinta la yaabka leh waxay tahay in Maraykanku mar weliba oo uu dad laayo hadana warbaahinta ka sheegto inuu dilay rag katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, taliska Africom ayaana war uu soo saaray ku sheegay inuu kuunyabarrow ku dilay dagaalyahanno katirsan Al-Shabaab.
Ugu dambeyntii waxaa mudan in la is waydiiyo goorma ayay gabar 20 cisho dhalan iyo macallin dugsi noqdeen dagaalyanno?
Halkan ka dhagayso Warbixin ku saabsan xasuuqyo Maraykanku ka geystay Koonfurta Soomaaliya.